Daahir Cilmi - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Daahir Aadan Cilmi)
S/G Daahir Aadan Cilmi taliyaha cusub ee Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed Waxa uu ku Dhashay, magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug sanadkii 1948.
Daahir Aadan Cilmi
طاهر ادم علمي
General, Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed
Janaayo 1948 ( 72Jir) kasoo jeeda beesha sheekhaal
Gaalkacyo Mudug Soomaaliya
Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed
Saraakiil Maraykan iyo Ruush
Dib udhiska Ciidanka.
General Daahir Aadan Cilmi oo loogu yeero "Indhoqarsho" waxbarashadiisi Dugsiga Hoose waxuu ku soo qaatay (Sudan Interior Mission School) ee magaalada Buuloburde, Dugsiga Dhexe waxuu ku soo qaatay ( American Minnenite Mission) oo la oran jiray "Shabeelle Intermediate School" ee magaaladda Jowhar, Dugsiga Sare wuxuu ku soo qaatay Banaadir Sare ee magaalada Muqdisho, waxuu aqoonta Jamacadeed ku soo qaatay Maraykanka "University of Massachusetts Boston". wuxuu kasoo jeedaa beesha sheekhaal
Wuxuu ku soo biiray Ciidanka Xogga Dalka Soomaaliyeed 1968, wuxune tababar ku soo qatay Kuliyadda Tababarka Ciidanka ee magaalada Odessa ee dalkii Midowga Sofiyet hadana ah Yukrayn, Sidoo kale wuxuu tababarro guud iyo kuwo khaas ku qaatay dalka gudihiisa (Tababar Abbanduul) iyo dibeddiisa (Command General Staff College, Kansas, USA).
General Daahir Aadan Cilmi Wuxuu ka soo shaqeeyay qeybo badan ee Ciidanka Xogga Soomaliyeed (Qeybta 60-aad, Qeybta 21-add, Qeybta 26-aad), isagoo ka qabtay xilal howlgal iyo mid hogaamiyeed.
Sidoo kale wuxuu jagooyin kala duwan ka qabtay Taliska Guud ee Wasaaradda Gaashaandhiga Soomaaliya iyo Kuliyadihii waxbarashada ee Xogga Dalka Soomaaliyeed. General Daahir Aadan Cilmi wuxuu mudadii Ciidanka uu ka tirsanaa muujiyay Hawlkarnimo, Hoggaamin, Maamul Hufan iyo Geesinimo.Waxuu sidoo kale qaatay billad dahabka ciidanka xooga dalka soomaaliya oo uu gudoonsiiyey General Maxamed Siyaad Barre waxuuna ku muteeystay wacdarihii u ka dhigay dagaalkii 1977 dii ee Xorayntii Soomaali galbeed ahaana guutadii qabatay qabri daharre waxay ahayd magaaladii labaad ay qabsadaan Ciidanka Soomaaliya.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Daahir_Cilmi&oldid=204087"
Last edited on 27 Luuliyo 2020, at 23:38
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 27 Luuliyo 2020, marka ee eheed 23:38.